ကိုဗစ်ဂယက်ကြောင့် ထမင်းငတ်ရတဲ့ ရွာ . . . - Thu Ta Myay
ကိုဗစ်ဂယက်ကြောင့် ထမင်းငတ်ရတဲ့ ရွာ . . .
ကိုဗစ်ဂယက်ကြောင့် ထမင်းငတ်ရတဲ့ ရွာ
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မိုင်းရယ်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့ နားမုန့်ဆိုတဲ့ကျေးရွာဟာ အိမ်ခြေ ၃ဝ ခန့်သာရှိတဲ့ ရွာလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကျေးရွာဟာ မြို့ပြနဲ့ နီးသလောက် ဖွံ့ဖြိုးမှုမှာ အတော်လေး နောက်ကျတာကို တွေ့ရပါတယ်။
တစ်နေ့လုပ် တစ်နေ့စားနဲ့သာ ကျင်လည်နေရတဲ့ ဒီရွာက ဒေသခံတွေဟာ ဒီ Covid-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးပြီး တစ်ချို့ရက်တွေမှာ ထမင်းတောင် ငတ်တယ်လို့ ရွာသားတွေက ပြောပါတယ်။
အထွေးဆိုသူ ရွာခံဟာ မိသားစုငါးယောက်နဲ့ တစ်နေ့လုပ် တစ်နေ့စားဘဝနဲ့ ရုန်းကန်နေရသူတစ်ယောက်ပါ။
တောင်ယာလုပ်ငန်းနဲ့ နေ့စားလုပ်တာတွေ လုပ်ကိုင်ပြီး မိသားစုစားဝတ်နေရေးကို ဖြေရှင်းပေးနေရသူပါ။ အမျိုးသမီးဖြစ်သူကတော့ ဖျာယက်လုပ်ပြီး မြို့ထဲမှာ သွားရောင်းလေ့ရှိပါတယ်။
အခုတော့ ဝင်ငွေရလမ်းဖြစ်တဲ့ နေ့စားအလုပ်လည်း မရှိတော့သလို ဖျာယက်တဲ့လုပ်ငန်းကလည်း အလုပ်မဖြစ်တော့ ပါဘူး။
အထွေးက “အရင်က နေ့စားခေါ်ရင် ငါးထောင်လောက်ရတော့ မိသားစုစားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေတယ်။ အခုတော့ နှစ်ထောင်ပဲရတယ်။ ဒါတောင် ပုံမှန်ခေါ်တဲ့လူ မရှိဘူး။ လုပ်စရာအလုပ်လည်း မရှိတော့ဘူး။ တောင်ယာလုပ်လဲ ကိုယ့်ထဲက အရင်းပဲ စိုက်ထုတ်နေရတာ” လို့ ပြောပါတယ်။
နေ့စားအလုပ်အပြင် ဖျာယက်လုပ်ငန်းဟာလည်း ဒီရွာရဲ့ စားဝတ်နေရေးကို တစ်ဖက်တစ်လမ်း အထောက် အကူဖြစ်စေတဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ ဒီလုပ်ငန်းဟာလည်း အလုပ်မဖြစ်တော့ပဲ ရပ်တန့်နေပါတယ်။
ဖျာယက်တဲ့လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မာ့အေးကလည်း “ဒီရွာမှာက ဖျာလုပ်သူတွေ ခြင်းတောင်းလုပ်သူတွေ များတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါတွေလုပ်ဖို့ ဝါးသွားခုတ်တာက ရွာနဲ့တအားဝေးတယ်။
ဖျာတစ်ချပ်ရဖို့ နှစ်ရက် သုံးရက် အချိန်ပေးရတယ်။ အခုက သူများ မဝယ်တော့ဘူးဆိုတော့ ဝင်ငွေ မရှိတော့ဘူးလေ။ အဲဒါကြောင့် အချို့ဆို စားစရာတောင် မရှိတော့ဘူး” လို့ ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Covid-19 ကာအတွင်း မြို့ပေါ်ကို မတက်လာဖို့ကိုလည်း မြို့ပေါ်ကလူတွေ ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်လာတာကြောင့် ရွာခံတွေဟာ မြို့ပေါ်ကို တက်ရောက်လာခြင်း မရှိတော့ပါဘူး။
“သူများပြောတာ အဲရောဂါ တအားကြောက်စရာကောင်းတယ်တဲ့။ ဘယ်မှလည်း မသွားကြနဲ့တဲ့။ မြို့ကလည်း ဖုန်းဆက်လာတယ်။ ရွာတိုင်းကလည်း ဘယ်မှမသွားကြဘူး။
အိမ်မှာနေကြတယ်။ တောင်ယာသွားတယ်။ အချို့ဆို စားစရာတောင် မရှိတော့ဘူး။ ပိုက်ဆံလည်း ရှာလို့မရဘူးလေ။ ရောင်းစရာတွေရှိလည်း ဘယ်သူမှ မဝယ်ကြဘူး။ မြို့ထဲသွားရင်လည်း သူများက အိမ်ထဲထိပေးမဝင်ဘူး” လို့ မာ့အေးက ဆက်ပြောပါတယ်။
Covid-19 ရောဂါရိုက်ခတ်မှုကြောင့် ဒီရွာထဲက မိသားစု ၅ စုဟာ အစားအသောက်အတွက် အတော်လေး အကျပ်အတည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ မာအီခမ်းတို့မိသားစုလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။
မာ့အီခမ်းဟာ ဖျာယက်လုပ်တာတွေနဲ့ ခြင်းတောင်းလုပ်တာတွေကို အဓိကပြုလုပ်ပြီး မိုင်းရယ်ဈေးမှာ သွားရောင်းနေတဲ့ ဒေသခံတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလုပ်ငန်းတွေဟာ အပိုဝင်ငွေ မရှိပေမယ့် မိသားစုစားဝတ်နေရေးကို ဖြေရှင်းနိုင်ပြီး အချို့အချိန်တွေမှာတော့ ဖျာ၊ ခြင်းတောင်းတွေကို ဆန်တို့ အစားအသောက်တို့နဲ့ အလဲအလှယ်ပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ အခုတော့ ဒါတွေ တစ်ခုမှ အဆင်မပြေတော့ပါဘူး။
“အခုတော့ နေ့စားခေါ်တာတွေရှိရင် သွားလုပ်တယ်။ ဖျာတွေဘာတွေ ရောင်းစရာနေရာက မရှိတော့ဘူး။ ရောင်းနေကျဆိုင်တွေလည်း ပိတ်ထားတယ်လေ။
အစားအသောက်ဆိုင်တွေဆိုလည်း ဝယ်နေကျဆိုင်တွေ မဟုတ်တော့ အရင်လို အဆင်မပြေတော့ဘူး။ အရင်တုန်းက လဲလို့ရတယ်။ အခုတော့ အဲဆိုင်တွေ ပိတ်ကုန်တယ်။ အခုတော့ နေ့စားလုပ်တော့ တစ်နေ့ နှစ်ထောင်ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီအလုပ်က နေ့တိုင်းမရှိဘူး” လို့ ပြောပါတယ်။
မိုင်းရယ်နဲ့ လားရှိုးခရိုင် မိုင်းယော်တိုက်နယ်ထဲက အစားအသောက် အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ ကျေးရွာ ၁၂ ရွာအတွက် တအာင်း သံဃာတော်များအဖွဲ့ (ဗဟို)နဲ့ အိုမ်တမာဝ်လူမှုကူညီရေးအသင်း (ကျောက်မဲ)တို့က ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ ၁၅ ရက်က စတင်ပြီးတော့ ကျေးရွာအထိ သွားရောက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြပါတယ်။
မိုင်းရယ်မြို့နယ်ထဲက နားမုန့်ကျေးရွာကလည်း ထောက်ပံ့တာတွေ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ မိသားစုရှိတဲ့အပေါ် မူတည်ပြီး ဆန်၊ ဆီ၊ ဆားနဲ့ အသားတုတွေကို ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီထောက်ပံ့မှုဟာ ရက်ပိုင်းလောက်သာ လုံလောက်မှာဖြစ်ပြီး Covid-19 ဖြစ်ပွားမှု ကာလရှည်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ဒီရွာတွေရဲ့ စားဝတ်နေရေးဟာ အတော်လေး အခက်အခဲဖြစ်နေအုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုဗစ်ဂယက် #ကျေးရွာဒေသခံ အစားအသောက်
ဓာတ်ပုံ- မိုင်းနော;ဒါင်း၊ မိုင်းအနိုင်၊ ရွှေဖီမြေ